စံချိန်တင်လောက်အောင်ကို မှားပါတယ်…တကယ်ကြီးပါ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » စံချိန်တင်လောက်အောင်ကို မှားပါတယ်…တကယ်ကြီးပါ…
Posted by johnnydeer on Feb 11, 2013 in Short Story | 1 comment
စနေ..တနင်္ဂနွေ…အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘော့လုံးပွဲ ၉ ပွဲ ကန်သွားပါတယ်…
နယူးက…ပြင်သစ်တသိုက်နဲ့မြူးကြွနေတယ်…ပြား 20 နဲ့ တစ်ကျပ်တော့လဲရမှာပေါ့…ချ..နယူးကာဆယ်….(အဖြေ…စပါး..2း1 နယူးကာဆယ်) ….ရှုံး….
နောဝစ်ခ်ျ အိမ်ကွင်းကောင်း..ဖူဟမ် အဝေးကွင်းညံ့…
ငါးမူးနဲ့တကျပ်လဲရမှာပေါ့…ချ..နောဝခ်ျ…. (အဖြေ…နောဝခ်ျ..0း0..ဖူဟမ်) ……ရှုံး…
စတုတ်ခြေ..ဒလဟော ကျနေတယ်….ရီးဒင်း တိုက်စစ်မှုး တစ်လတာ အကောင်းဆုံးဆု ရထားတယ်…ခြေကျတဲ့ကောင် အပေါ်ကြေးရောက် ဘယ်တော့မှ မအောင်ဘူး…ချ….ရီးဒင်း…. (အဖြေ…စတုတ်…2း1 ရီးဒင်း) …..ရှုံး…
ချယ်လ်ဆီး နောက်ဆုံးပွဲတောက်လျှောက် ခြေကျနေ…နှစ်လုံးအထက်ပြတ်သောပွဲနည်းလာ..
ချယ်လ်ဆီးနဲ့ အာစင်နယ် နှစ်ပွဲတွဲ ရှောင်လောင်း…မရှုံးနိုင်..
ချ…၀ီဂန်… (အဖြေ…ချယ်လ်ဆီး…4း1 ၀ီဂန်) …..ရှုံး….
ချယ်လ်ဆီးနဲ့ အာစင်နယ် နှစ်ပွဲတွဲ ရှောင်လောင်း…မရှုံးနိုင်…ပြီးတော့ အိမ်ရှင်အောက်ကြေးလက်မနှေးနဲ့တဲ့…
ဈေးအလိုအရတော့ သေချာပေါက် ဆွမ်ဆီးပဲ…ဘယ်လိုမှ ဒီဈေးမပေါက်သင့်ဘူး..
ဒါပေမယ့် QPR ရဲ့ရုန်းအားကြောင့် 45 ပြားနဲ့ တကျပ်လဲသင့်တယ်ထင်တာပဲ…ဟယ်ရီရက်နက် ဒီလောက်မညံ့ပါဘူး…
ချ…QPR (အဖြေ…ဆွမ်ဆီး…4း1 QPR) …..ရှုံး….
တအားကြိုက်တယ်..ဆောက်သင်ပတန်ကို…ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က မန်ယူ ပရိသတ်လေ…မန်ယူကို မသိစိတ်ကနေ..ဖလားရစေချင်တယ်…မန်စီးတီးကချလိုက်ရင်
မန်စီးတီးနိုင်ရင် ပိုက်ဆံရမယ်…ရှုံးရင် မန်ယူ အခြေအနေကောင်းမယ်…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…
ချ..မန်စီးတီးပဲ… (အဖြေ…ဆောက်သင်ပတန်..3း1 မန်စီးတီး) …..ရှုံး…..
အေဗီလာ..အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်းမရွေး ရှိသမျှအသင်းအကုန်ရှုံးနေတယ်…ပြီးတော့ Level 10 ပေါက်တဲ့ပွဲ များသောအားဖြင့် အိမ်ဌားစားတယ်…
ချ…၀က်စ်ဟမ်း (အဖြေ….အေဗီလာ…2း1 ၀က်စ်ဟမ်း) …..ရှုံး……
ဈေးကြည့်တာနဲ့ ကလေးတောင်သိတယ်…မန်ယူအိမ်ကွင်း…အနဲဆုံး..1= ပေါက်ရမှာ…
မန်ယူတွေခေါ်ထားတာ…ဈေးဖွင့်တဲ့သူက အဲဗာတန် တအားကြိုက်နေတယ်…ဈေးဖောက်တဲ့သူဆိုတာ ဆရာ….မန်ယူနိုင်တော့လဲ ချန်ပီယံဖြစ်တာပေါ့…
ချ…အဲဗာတန်…. (အဖြေ….မန်ယူ…2း0 အဲဗာတန်) …..ရှုံး……
ဒီလိုနဲ့ပဲ ပွဲတိုင်း စံချိန်တင် ရှုံးသွားပါတယ်….
ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ဟာ ကံဇာတာ တအားနိမ့်လာပြီ ဆိုရင် စ တွေးတဲ့အတွေးကိုက မဟုတ်တာ စတွေးမိတယ်တဲ့…မဟုတ်တာတွေပဲ လုပ်မိတယ်တဲ့…ကဲ..အခုလဲ မဟုတ်တာတွေပဲ ရေးမိပြန်ပြီ….ကံကြမ္မာ ဂြိုဟ်စီးရင် သေးပေါက်ရင်းတောင် ကိုယ့်ဟ၀ှာကို မြွေမှတ်လို့ ထ ခုန်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လောက်တယ်….
(ဘော့လုံးဝါသနာတူချစ်ပရိသတ်ကတော့ မေးတော့မယ်…ရှောင်ချင်လို့ဆိုပြီး….နောက်ဆုံးပွဲလေးကော ဘယ်လို စဉ်းစားပါသလဲလို့…ကဲ..ပြောမယ်နော်…လီဗာပူးနဲ့ဝက်စ်ဘရွန်းပွဲလေး..တစ်ပြတ်ပေါက်တယ်…တနလာင်္နေ့ဆိုတာ အောက်စားတယ်…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…၀က်စ်ဘရွန်းပဲ…ကျွန်တော် ဆယ်ပွဲလုံးပဲမှားမလား…တပွဲတော့ မှန်ဦးမလား…ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲ စဉ်းစားကြတော့…)
မှန်လိုက် လေ အစ်ကိုရာ၊ ကြွေကျ ရင်ဆက်တိုက်ကြ တယ်ဆိုတာ။